SAWIRO IYO FAAHFAAHIN WEERAR LAGU QAADAY HOTEEL HILAAL UK OO KU YAALA WADADA MAKA AL-MUKARAMA | Goojacade
Home War SAWIRO IYO FAAHFAAHIN WEERAR LAGU QAADAY HOTEEL HILAAL UK OO KU YAALA...
SAWIRO IYO FAAHFAAHIN WEERAR LAGU QAADAY HOTEEL HILAAL UK OO KU YAALA WADADA MAKA AL-MUKARAMA
Wararka hor-dhac ah ayaa sheegaya in tiro ka badan 20-qof ay ku naf-waayeen, kontomeeyo kalena ay ku dhaawacmeen qarax culus oo caawa lagu weeraray Hoteel lagu magacaabo Hilaal UK oo ku yaalla waddada Maka Al-Mukarama ee Muqdisho, iyadoo goobta uu qaraxaani ka dhacay weli laga maqlayo rasaas dhacaysa.
Qaraxan oo ahaa mid aad u xooggan oo laga maqlay inta badan Muqdisho ayaa wuxuu ka mid noqonayaa qaraxyadii ugu waaweynaa ee caasimadda Somalia ka dhaca, waxaana burburay dhismayaal u dhaw halka uu qaraxu ka dhacay.
Sidoo kale, wararka ayaa waxay sheegyaan in kooxo hubeysna oo daba socday qaraxa uu saameyn ku yeeshay Hoteelka Maka Al-mukarama oo aan ku dhaw hoteelka la weeraray, iyadoo dad badan ay ku xayiran yihiin labada hoteel ee dariska ah.
Dadka weerarka ka badnaaday, balse uu dhaawaca fudud kasoo gaaray waxaa ka mid ahaa; Xoghayaha Guud ee Ururka Suxufiyiinta NUSOJ, Maxamed Ibraahim Macallimuu oo ku sugnaa Hotel Maka Al-Mukarama, isagoo shegay inuu arkay maydadka in ka badan 15-qof iyo dad kale oo dhaawacyo kala duwan qaba.
Goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa waxaa ku sugnaa dad aad u fara badan, iyadoo caawa ay ahayd habeen Jimco ah oo dadka inta badan ay magaalada u soo baxaan, waxaana agagaarka hotel Maka Al-Mukarama inta badan la dhigtaa gaadiidka.
Dhanka kale, Goobjoogayaal la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in gaadiid badan oo goobta yaallay iyo dhismayaal ganacsi ay gubanayaan, waxaana goobta gaaray gaadiidka gurmadka deg-degga ah iyo ciidamada ammaaka Dowladda Somalia.
Qaraxyada noocan oo kale ah ee ka dhaca Muqdisho ayaa intooda badan mas’uulyadooda sheegata Al-shabaab, iyadoo qaraxan uu ma mid yahay kuwii ugu cuslaa ee ka dhaca Muqdisho.
Ugu dambeyn, Hay’adaha Amniga Dowladda Somalia ayaan weli ka hadlin qaraxa iyo weerarka daba socday ee caawa ka dhacay Maka Al-Mukarama oo ah waddo aad u mashquul badan, iyadoo weerarkan uu imaanayo iyadoo ay maanta ciidamada Dowladda Somalia la wareegeen saldhig muhiim ahaa oo ay ka guureen ciidamada AMISOM.
Previous articleSawiro Kulan dhexmaray Madaxweyne Farmaajo iyo Amiirka dalka Qatar
Next articleMADAXWEYNE DENI OO KA TACSIYEEYAY DADKII KU DHINTAY QARIXII MUQDISHO